भक्तपुरका महिलाहरूले 'रेस्क्यू' गरेको रानीपोखरी :: Setopati
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज ९
यो २०७५ फागुनको कुरा हो। भुइँचालोले थला परेको रानीपोखरी चार वर्षदेखि कोमामा थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले कंक्रिट र टायल भरेर पोखरीलाई 'स्विमिङ पुल' बनाउन आँटेको थियो। सर्जरी गर्नुपर्ने बिरामीको मुटु झिकेर नयाँ फेर्दिन खोजेजस्तो!
त्यो बेला भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय उपभोक्ता समितिबाटै भाजुपोखरी पुनर्निर्माण गर्दै थियो। कालो माटो प्रयोग गरेर मौलिक शैलीमा पोखरी बन्दै गरेको देखेपछि ज्ञवालीले नगरप्रमुख सुनील प्रजापतिलाई भेटेर भने, 'भक्तपुरको यही सीप प्रयोग गरेर काठमाडौंको रानीपोखरी बनाउनुपर्‍यो। तपाईंहरू मद्दत गर्नुहुन्छ?'
त्यसपछि दुमरुले भाजुपोखरीमा काम गरिरहेका महिला–पुरुषलाई डाकेर भने, 'काठमाडौंले सहयोग मागेको छ। हामीले रानीपोखरी बनाउन जानुछ। को–को तयार हुनुहुन्छ?
'रानीपोखरीको विवाद हामीले सुनेका थियौं। मेयर र उपमेयरबीच जुहारी नै चलेको थियो। अभियन्ताहरूले पुरानै शैलीमा बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थिए,' रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा भक्तपुरको संलग्नता सम्झँदै दुमरुले भने, 'लामो समय विवादित भएपछि प्राधिकरणले भक्तपुरसँग सहयोग मागेको थियो। हामी पछि हट्ने कुरै थिएन।'
उनले अगाडि भने, 'त्यो हाम्रो लागि जिम्मेवारी पनि थियो, चुनौती पनि। प्राधिकरणका सरहरू हामीले मौलिक शैलीमा भाजुपोखरी बनाएको देखेर रानीपोखरी पनि त्यस्तै बनाउनुपर्‍यो भन्दै आउनुभएको थियो। हामीले उहाँहरूको विश्वास तोड्ने कुरै आएन।'
प्राधिकरणले यो मान्यता स्वीकार गर्‍यो, दुमरुले भने, 'उहाँहरूले अजयरत्न स्थापितको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गर्नुभयो। हामीले समिति र प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्दै शिवरात्रिको दिनबाट काम सुरू गर्‍यौं।'
'हामी बिहानै ८ बजे घरबाट निस्कन्थ्यौं। हरेक दिन हामीलाई भक्तपुरदेखि रानीपोखरीसम्म लैजान एउटा बस रिजर्भ गरिएको थियो। दुई–तीन घन्टा त जान–आउनमै लाग्थ्यो,' उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन्, 'भाजुपोखरीमा सँगै काम गरेका साथीहरू भएकाले निकै रमाइलो भयो। काम गरेजस्तै भएन, सधैं पिकनिक गएजस्तो हुन्थ्यो।'
'पहिलो दिन जाँदा त हामी अलमलिएका थियौं। पोखरी बनाउन भनेर आएका छौं, आँखा अगाडि यत्ति लामो लामो घाँस उम्रेको छ। त्यत्रो ठूलो पोखरीको घाँस कहिले पन्छाइसक्नु! कहिले माटो खन्नु, कहिले पोखरी बनाउनु! हामीलाई त सकिन्न कि क्या हो भन्ने भएको थियो। विस्तारै काम गर्दै गयौं,' उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन्।
अगाडि भनिन्, 'महिना दिनमा झाडी पन्छाइसकेपछि अलि हेर्न हुने भयो। त्यसपछि चाहिँ हिम्मत बढ्यो। अनि त कोही साथीहरू कालो माटो मुछ्ने, कोही ओसार्ने, कोही सम्याउने, कोही पोखरीको डिलमा पर्खाल लगाउने– एक सुरमा धमाधम काम भयो।'
'हामी त गीत गाउँदै आउँथ्यौं, गीत गाउँदै काम गर्थ्यौं, गीत गाउँदै जान्थ्यौं। सरहरूले कहिलेकाहीँ कत्ति गफ गरेको भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो। जति गफ गरे पनि आफ्नो काम भ्याए त भइहाल्यो नि, होइन सर? गफ गर्‍यो भन्दैमा काम ठगेर बसेको होइन!' उनले भनिन्।
'मैले त देखेको हो, भित्र छिरेको चाहिँ थिइनँ। यसपालि छिर्न पाइयो। हाम्रै दुई–चार जना साथीले पहिलोचोटि देख्नुभएको रहेछ,' मैयाँले भनिन्, 'काठमाडौं गए पनि रानीपोखरी जानुभएको रहेनछ।'
'पहिले ठेकेदारले कंक्रिट पर्खाल लगाउन डोजर चलाएका कति ठाउँमा न माःआपा (परम्परागत इँटा) बाँकी थियो न बालुवा,' उनले भने, 'हामीले पोखरीको पिँधमा पूरै कालो माटो भरेर त्यसमाथि माःआपाले सोलिङ गरेका छौं।'
सोलिङ गरिएन भने माछाले तलको हिलो खाइदिन्छ, उनले अगाडि भने, 'यहाँ सबभन्दा तल पाँगो माटोको तह छ। त्योभन्दा माथि तीनदेखि छ फिट बालुवा छ। बालुवाभन्दा माथि डेढ फिट कालो माटोको पत्र र त्यसमाथि इँटा सोलिङ गरिएको छ।'
'सुरूमा गाह्रो काम जति हामीले गर्‍यौं, पछि हामीलाई विदा गरेर ठेक्कामा काम लगायो,' मैयाँले भनिन्, 'यो पोखरी त अब बन्दै बन्दैन भनेर सबैले गाली गरेका बेला हामीलाई डाक्यो, हामीले सारा काम गरेर पोखरीजस्तो बनायौं, माटो पुछ्ने, इँटा सोलिङ गर्ने, गारो लगाउने सबै काम गर्‍यौं। लास्टमा गएर हामीलाई हटाइयो।'
'पोखरी बनाउन भनेर लगेपछि पानी नभरिएसम्म हामीलाई नै काममा लगाएको भए के बिग्रन्थ्यो,' उनले गुनासो सुनाइन्।
'पानी भरिएको छ भन्ने सुनेको छु, तर हेर्न गएको छैन,' उनले भनिन्, 'के जानु!'
'हामीले सुरूमै भनेका थियौं, ठेक्कामा काम गर्ने भक्तपुरको मान्यता होइन। हामी उपभोक्ता समितिबाटै काम गर्नुपर्छ भन्नेमा अडिग छौं। उहाँहरूले पछि ठेक्कामा लगाउने कुरा गर्नुभयो। हामीलाई नै ठेक्कामा लिनुस् भनेर पनि भन्नुभयो। हामीले मानेनौं र फर्केर आयौं,' उनले भने।
'हामी त सहयोग गर्न गएका हौं। सात–आठ महिनामा आफूसँग भएको ज्ञान, सीप र शैली सबै सिकाइसकेका थियौं,' उनले भने, 'बाटो देखाइदिएपछि जो आएर काम गरे पनि बिग्रँदैन भन्नेमा ढुक्क थियौं।'
'पुर्खाले सिकाएर गएको सीप र शैली हामीले आफ्नो ठाउँमा त प्रयोग गरेकै थियौं, त्यसलाई बाहिर पनि प्रदर्शन गर्न पाउँदा गर्व लागेको छ,' उनले भने।
उनले यो पनि भने, 'रानीपोखरी बन्दै नबन्ने हो कि भनेर सबैको मनमा चिसो पसेको थियो। हामीले पुरानै स्वरूपमा बनाएर देखायौं। आज रानीपोखरी देख्दा कुन नेपालीलाई खुसी नलाग्ला? यसमा भक्तपुरको हात छ भन्ने सोच्दा कुन भक्तपुरेलाई गर्व नहोला?'
'पोखरी निर्माणको लगभग सबै काम उहाँहरूले नै गर्नुभएको हो। अलि चाँडो होस् भनेर माटो ओसार्ने, बगैंचा सिँगार्नेजस्ता काम ठेक्कामा लगाएका हौं,' उनले भने, 'यसमा उपभोक्ता समिति प्रत्यक्ष संलग्न छ। भक्तपुरका कालिगढबाट सिकेको सीप र ज्ञान प्रयोग गरेर काठमाडौंको उपभोक्ता समितिले काम गर्दैछ।'
'वर्षौंदेखि रोकिएको काममा उहाँहरूले हात हालेर पार लगाइदिनुभयो। उहाँहरूको ऊर्जाले नै हामीमा रानीपोखरी पुरानै स्वरूपमा फर्कन्छ भन्ने विश्वास पलाएको हो,' उनले भने।
'हाम्रो त्यो चुनौतीमा भक्तपुरले साथ दियो,' उनले भने।
'अहिले हामीसँग भएका कालिगढ परम्परागत शैलीमा पोखरी बनाउन पोख्त भइसकेका छन्,' उनले भने, 'पुर्खाबाट सरेर आएको ज्ञान नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं।'
भोलि अरू पोखरीमा काम गर्न त बोलाउँदै गरौंला, अहिलेलाई रानीपोखरी 'रेस्क्यू' गर्ने भक्तपुरलाई काठमाडौंले औपचारिक धन्यवाद दिनुपर्छ कि पर्दैन?
'भक्तपुर नगरपालिका र त्यहाँका कालिगढहरू धन्यवादका हकदार छन्,' प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवालीले भने, 'हामी एउटा कार्यक्रम गरेर सबै कालिगढलाई रानीपोखरी हेर्न निम्ता गर्दैछौं।'
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १०, २०७७, ०२:५६:००